भक्तपुर अटोमोवाइल्स एसोसिएसन गठन
भक्तपुरमा रहेका अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरुको भेलाले भक्तपुर अटोमोवाइल्स एसोसिएसन गठन गरिएको छ।
बार दिवसमा प्रदर्शन (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । बार दिवस–२०७८ का अवसरमा कानुन व्यवसायीहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन, उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटन, ललितपुर जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन र भक्तपुर जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको अगुवाइमा प्रदर्शन गरिएको हो । त्यसक्रममा सर्वोच्च अदालत परिसरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म र्‍याली गरिएको थियो । विचार गोष्ठी पनि...
भक्तपुरमा रहेका अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरुको भेलाले दीपेन्द्र खर्वुजाको अध्यक्षतामा भक्तपुर अटोमोबाइल्स एसोसिएसन गठन गरिएको छ । सात सदस्यीय एसोसिएसनकोे सचिवमा स्वयम्भुरत्न शाक्य, कोषाध्यक्षमा सुरेन्द्रप्रसाद प्रजापति रहेका छन् । सदस्यहरुमा दीपेश बेजू, राजेश कवां, महेन्द्र दुवाल र रामकृष्ण श्रेष्ठ रहेका छन् ।भक्तपुरमा अटोमोबाइल्ससम्बन्धी काम गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायीको हकहितको उद्देश्यका साथ एसोसिएसन गठन गरेको अध्यक्ष खर्वुजाले जनाए । […]
मंसिर १३, काठमाडौैं । कोरोना महामारी केही कम भएसँगै अन्य व्यवसायले बिस्तारै लय समाति सकेका छन् । पुष्प व्यवसायले भने पुरानै लय लिन अझै एक वर्ष लाग्ने बताइएको छ । कोरोना भाइरसका कारण पुष्प व्यवसायले दैनिक रू. एक करोडसम्मको नोक्सान सामना गर्नुपर्‍यो । अहिले विस्तारै व्यवसाय सञ्चालनमा आए पनि महामारी शुरु हुनुपूृर्वको जस्तो बजारमा चहलपहल हुन सकेको छैन । भर्खर चाडबाड सकिएको छ । अहिले विवाहको मौसम हुँदा पनि आशाअनुरुप फूलको कारोबार हुन सकेको छैन । त्यसैले १६ महीनाअघिको यस व्यवसायले लय समात्न ६ महीनादेखि एक वर्षको समय लाग्ने फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष मीनबहादुर तामाङले बताए । उनले भने, ‘कोरोना महामारी अझै हटेको छैन । विश्वासका साथ व्यवसायीले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन पाएका छैनन् । लामो समयसम्म व्यवसाय चलायमान गर्न नपाएपछि २५ प्रतिशत व्यवसायी अन्य पेसामा पलायन भइसकेका छन् ।’ कोरोना शुरु हुनुभन्दा पहिले असोजदेखि फागुनसम्म फूल उत्पादन र विक्री वितरण हुन्थ्यो । विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीको एकपछि अर्को लहर आउँदा यस व्यवसायले डेढ वर्षदेखि पर्याप्त आम्दानी गर्न सकेको छैन । त्रासकै बीच लामो समयदेखि बन्द रहेको अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा आउँदा पनि यस व्यवसायले गति समात्न अझै नसकेको अध्यक्ष तामाङ बताउँछन् । कोरोना अघि सामान्य समयमा दैनिक रू. एक कारोडभन्दा बढी फूलको कारोबार हुने गरेको थियो । गत जेठ–असारमा कोरोना उच्च विन्दुमा पुग्दा मुस्किलले रू. दुई लाखमा मात्र चित्त बुझाउनु परेको अध्यक्ष तामाङ सम्झनुहुन्छ । हरेक वर्ष रू. तीन अर्बको कारोबार गरिरहेको उक्त व्यवसायले गत आर्थिक वर्षमा रू. एक अर्ब ६५ कारोड मात्र कारोबार गरेको थियो । विशेषगरी तिहारका लागि सयपत्री र अन्य समयमा सजावटका लागि केही फूल भारतबाट आयात हुने गरेको छ । व्यावसायिक रुपमा ४५० प्रजातिका फूल नेपालमा उत्पादन हुँदै आएका छन् । यस व्यवसायबाट ४१ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिएका छन् । नेपालमा लगभग १५७ हेक्टर क्षेत्रफलमा ७०० व्यवसायीले यसको खेती गर्दै आएका छन् । फूलको मागमा आएको वृद्धिसँगै विशेषगरी काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, चितवन, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, गुल्मी, पाल्पा, धादिङ, मोरङलगायत ४१ जिल्लामा पुष्पखेती तथा नर्सरी विस्तार भइसकेको छ । नेपालमा २००७ सालदेखि शुरु भएको पुष्प व्यवसाय सहरीकरणको विकाससँगै फस्टाउँदै गएको छ । रासस